नायीका प्रियंका कार्कीले एल्बम निकाल्ने - NewsPolar NewsPolar
★ वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन दिई ठग्ने पक्राउ ★ संसद् शून्य समय: कर्णालीका बालबालिकालाई पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन माग ★ बुढीगंगा निर्वाचन: मतदान केन्द्रमा तनाव, प्रहरीद्वारा हवाई फायर ★ राष्ट्रियसभामा दुई विधेयक पेश ★ सडकमा पानीको दह ! ★ माओवादी केन्द्रले चाँडै विशेष महाधिवेशन गर्ने ★ अर्थमन्त्रीको त्यागले गठबन्धन अप्ठ्यारोबाट बच्यो: प्रचण्ड ★ एक हजार ४०० ले घट्यो सुनको मूल्य ★ आजदेखि साझाका बिजुली बस चल्दै ★ माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठक सुरु
नायीका प्रियंका कार्कीले एल्बम निकाल्ने
२३ कार्तिक २०७१, आईतवार ०५:३६
बलीउड नायीका प्रियंका चोपंडा गायीकाको रुपमा पनि परिचित छिन् । दुईवटा एलवम समेत निकालीसकेकी प्रियंकाको स्वरलाई पनि धेरैले रुचाएको पाईयो । यत कलिउडकी नायीका प्रियंका कार्कीले पनि बलीउडकी प्रियंकाको जस्तै गायनमा पनि जम्ने तयारी गरेकी छिन् । प्रियंकाले आफ्नै स्वरमा एउटा सोलो एल्बम निकाल्ने तयारी गरेकी छिन् । नाम नजुराइएको एक एल्बममा ८ वटा गीत रहनेछ जहाँं प्रियंकाको स्वर सुन्न सकिने छ । सबैले आफूलाई राम्रो गीत गाउँछ्यौ भनेपछि एल्बम निकाल्ने सुरमा रहेको प्रियंकाले जानकारी गराईन् ।
सानैदेखि गायनमा रूची रहेको बताउने नायीका प्रियंकाले यस अघि नै चलचित्र आवरणको शिर्ष गीत गाएकी थिइन् । आगामी साताबाट स्वतन्त्र… बोलको गीतबाट रेकर्डिङ शुरू गर्ने उनको भनाई छ । यसमा शब्द शैलेश श्रेष्ठ र संगीत शैलेन्द्र सिंहको रहनेछ । उनले आफूसँग भएको प्रतिभा देखाउन खोजेको बताईन् । उनले आठवटै गीतको भिडियो बनाउने बताएकी छिन् । अभिनय र गायनको अलवा प्रियंका एक कुशल करियोग्राफर समेत हुन् । उनले मेरो बेस्ट फ्रेन्ड, पुण्टे परेड र मिसन पैशा लगायतका चलचित्रका गीतमा करियोग्राफी गरेकी छिन् ।
बुढीगंगा निर्वाचन: मतदान केन्द्रमा तनाव, प्रहरीद्वारा हवाई फायर
राष्ट्रियसभामा दुई विधेयक पेश
सडकमा पानीको दह !
माओवादी केन्द्रले चाँडै विशेष महाधिवेशन गर्ने